ပတ္တနမြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ မြေပုံကို ပြသရန်
Bihar၏ မြေပုံကို ပြသရန်
ဗီဟာပြည်နယ်အတွင်း ပတ္တနမြို့ တည်နေရာ
ကိုဩဒိနိတ်: 25°36′N 85°06′E﻿ / ﻿25.6°N 85.1°E﻿ / 25.6; 85.1ကိုဩဒိနိတ်: 25°36′N 85°06′E﻿ / ﻿25.6°N 85.1°E﻿ / 25.6; 85.1
• မြူနီစပယ် ကော်မရှင်မင်းကြီး
ဧရိယာ [A ၁]
(ခန့်မှန်း) ၁၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၃၈.၆ စတုရန်းမိုင်)
၁၃၅.၇၉ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၅၂.၄၃ စတုရန်းမိုင်)
၁၁၆၇.၀၄ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၄၅၀.၆ စတုရန်းမိုင်)
၅၃ မီတာ (၁၇၄ ပေ)
၁,၆၈၃,၂၀၀ (IN: ၁၉)
၁၆,၉၂၅/km၂ (၄၃၈၄၀/sq mi)
၂,၀၄၆,၆၅၂ (IN: ၁၈)
800001 - 800030 805101-805110
၈၈၂ (အမျိုးသား ၁၀၀၀ လျှင်) ♂/♀
ပျမ်းမျှ နှစ်စဉ် အပူချိန်
၂၆ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် (၇၉ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်)
ပျမ်းမျှ နွေရာသီ အပူချိန်
၃၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် (၈၆ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်)
ပျမ်းမျှ ဆောင်းရာသီ အပူချိန်
၁၇ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် (၆၃ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်)
↑ The metropolis comprises Patna Metropolitan Area Authority (PMAA) area. [မှတ်စု ၁]
ပတ္တနမြို့ (အင်္ဂလိပ်: Patna; /ˈpætnə, ˈpʌt-/ ( နားဆင်),) သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဗီဟာပြည်နယ်၏ မြို့တော်နှင့် အကြီးဆုံး မြို့ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ ခန့်မှန်း ၁.၆၈ သန်းရှိခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ၁၉ ခုမြောက် အကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်သည်။
↑ Master plan for Patna (2031), approved by Bihar Cabinet on 27 October 2016. The draft master plan for Patna metropolitan area proposes that Patna Metropolitan Region would incorporate Bihta, Danapur, Khagaul, Daniyawan, Danaura, Fatuha, Khusrupur, Maner, Masaurhi, Naubatpur, Phulwari Sharif, Punpun and Sampatchak blocks of Patna district, areas of Vaishali and Saran districts are excluded.
↑ NDA-backed Sita Sahu is first woman mayor of Patna | india news | Hindustan Times
↑ Patna Municipal Corporation (PMC) | Swachh Bharat #MyCleanIndia
↑ Cabinet OKs Patna master plan, paves way for big bulidings, new airport | Patna News - Times of India
↑ Bihar Cabinet OKs Patna master plan, paves way for big buildings, new airport။ Economics Times (15 May 2015)။ 28 October 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Master Plan for Patna, 2031.။ Center for Environmental Planning and Technology။ Urban Development & Housing Department, Govt. of Bihar (13 August 2015)။9June 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 October 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ CPRS Patna About Us။ CRPS။9January 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 October 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇.၀ ၇.၁ Provisional Population Totals, Census of India 2011; Urban Agglomerations/Cities having population 1 lac and above (PDF)။ Office of the Registrar General & Census Commissioner, India။ 26 March 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jones၊ Daniel (2003) ၊ Peter Roach, James Hartmann and Jane Setter (eds.)၊ English Pronouncing Dictionary၊ Cambridge: Cambridge University Press၊ ISBN 3-12-539683-2 Cite uses deprecated parameter |editors= (အကူအညီ)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပတ္တနမြို့&oldid=642729" မှ ရယူရန်
CS1 အမှားများ: deprecated parameters
အသံသွင်းထားသော အသံထွက်များပါဝင်သည့် စာမျက်နှာများ (အင်္ဂလိပ်)
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။